ज्ञानेन्द्रलाई मोदीले भेट्लान त ?
ज्ञानेन्द्रलाई मोदीले भेट्लान त ? - Nepal Talk
काठमाण्डौ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटको पहल गरेका छन्। उनले नेपाल र भारतमा रहेका आफ्ना शुभेच्छुक मार्फत् भेटको पहल गरेको बुझिएको छ।
मोदीको जीतबाट निर्क खुशी पूर्व राजाले बधाई समेत दिएका छन्। उत्साही भएका शाहले मोदीलाई शाहले बधाई सन्देश पठाएका हुन्। सनातन हिन्दु धर्मको रक्षामा जोड दिदै आएको भारतीय जनता दलको भारतमा भएको सानदार जीतले शाहमा नयाँ आशा जागृत भएको बुझिएको छ।
भाजपा शक्तिशाली हुँदाले लाभ लिन सकिने भन्दै सक्रियता देखाउन निकटस्थले पूर्व राजालाई सुझाव दिएका छन्। थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका पूर्व राजाले त्यहाँ बस्दा समेत मोदीसँग भेटका लागि सम्पर्क सूत्रहरुसँग विभिन्न तरिकाले छलफल गरेका छन्। उनले मोदीसँग भेटको माहोल तयार गर्न विश्वासपात्रहरुलाई पटक पटक भारत पठाए पनि सम्भव भएको थिएन।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल फर्किए पछि नेपालगन्ज जाने तय भएको छ। बैंककमा पारिवारिक भ्रमणमा रहेका उनी ३ असारमा फर्कदै छन्। ५ जेष्ठमा बैंकक उडेका शाहको लामो विदेश बसाईं पारिवारिक भ्रमणका लागि मात्र सिमित नभएको बुझिएको छ। उनले केही विशेष भेटहरु गरेको विश्वस्त सूत्रले जानकारी दियो।
शाह स्वदेश फर्किए पछि केही दिन आराम गरेर काठमडौं भ्रमणमा जाने तय भइ सकेको निकटस्थले जानकारी दिए। शाहले यसपटकको जन्मदिन नेपालगन्जमा मनाउने भएका छन्। २३ असारमा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन पर्छ। पछिल्लो समय उनी नेपालगन्ज निकै आवत्जावत् गर्दै आएका छन्।
नेपालगन्ज भ्रमणकै बखत अचानक लखनऊ पुगेर योगीसँग भेटेका थिए। २०७४ सालमा भएको योगीसँगको भेट पछि पूर्व राजा निकै उत्साही भएको निकटस्थले बताए।
योगीसँगको अर्थपूर्ण भेट
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग डेढ वर्ष अधि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको महत्वपूर्ण भेट भएको थियो। नेपालगन्ज पुगेका पूर्व राजा सिधै लखनऊ पुगेर योगीसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटको तस्वीर योगी आफैले सार्वजनिक गरेका थिए।
योगीसँगको भेटले नेपाली राजनीतिमा तरंग आएको थियो। योगी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने पक्षका हुन्। उनी मुख्यमन्त्री नहुँदै नेपाल आएर हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुर्नस्थापनाको पक्षमा बोलेर गएका थिए। मुख्यमन्त्री भए पछि भने उनी दुवै विषयमा मौन छन्।
थाइल्यान्डमा एक महिने बसाईँ
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र उच्च मावि तहको शिक्षा पूरा गरेकी जेठी नातिनी पूर्णिकाको दिक्षान्तका लागि भन्दै बैंकक पुगेका हुन्। उनका साथमा परिवारका अन्य सदस्य समेत छन्। पूर्व राजा एक महिना विदेश बस्नुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ।